Shirkada Apple ayaa soo saartay telefoonkeeda cusub ee iPhone 12 oo ku shaqeyn doona 5G… – Hagaag.com
Posted on 14 Oktoobar 2020 by Admin in Technology // 0 Comments
Shirkada Apple ayaa soo saartay telefoonkeeda cusub ee iPhone 12 oo aad u dheereeya kuna shaqeeya 5G, waxaa sicirkiisa lagu bilaabay $799, shirkadduna waxay rajeyneysaa inay sii waddo iibkeeda illaa sanadka dhammaadkiisa.
IPhone 12 wuxuu leeyahay shaashad dhan 6.1-inch iyo dhinacyo fidsan, oo lamid ah iPhone 5. Sidoo kale Apple ayaa waxay soo saartay nooca “mini” oo leh 3 kaamero iyo shaashad 5.4-inch, qiimahiisu waa $ 699, iyo nooca “Pro”.
Hans Vistberg, oo ah agaasimaha guud ee shirkadda Verizon Communications Inc., ayaa sheegay in iPhones-ka cusubi ay la shaqeyn doonaan shabakadda 5G ee “ultra-fast” oo loogu talagalay in lagu fududeeyo caqabadaha ka jira magaalooyinka waaweyn sida New York iyo Los Angeles iyo sidoo kale meelaha dadku ku badan yahay sida garoomada kubbadda cagta.
Apple waxay sheegtay inay ku tijaabisay “5G” in ka badan 800 oo shirkadaha isgaarsiinta ah oo ku kala yaal 30 gobol oo adduunka ah.
Telefoonka cusub wuxuu yeelan doonaa gaashaan dhalo ah oo ka ilaaliya marka uu dhaco inuu jajabo.
Apple ayaa sidoo kale waxay ku dhawaaqday, “HomePod Mini”, oo ku yimaada midabyada cadaanka iyo cirro oo lagu iibsan doono $99, waxaana raridiisa la bilaabi doonaa bisha November 16da.
Waxaa xusid mudan in shirka Apple uu dhacay bil ka dib waqtigiisii ​​caadiga ahaa.
IPhone-ka la shaaciyey ayaa tijaabin doona in Apple ay weli awood u leedahay inay sii wado guusheeda, iyo inuu ka faa’iideysto xamaasada macaamiisha ee shabakadaha 5G oo aad uga dheereeya kuwii ka horreeyey.